इजी स्लिमका विशेषता - अन्तर्वार्ता - नारी
इजी स्लिमका विशेषता
मंसिर २०, २०७४
रोजिना शाक्य, अध्यक्ष,
इजी स्लिम एन्ड ब्युटिकेयर, मीनभवन
इजी स्लिममा के–कस्ता सुविधा उपलब्ध छन् ?
इजी स्लिममा तौल घटाउने, फिगर मेन्टेन गर्ने, स्तन तथा हिपको साइज मिलाउने, बडी थेरापी, बीएम आई आदि सुविधा उपलब्ध छन् । यहाँ ब्युटिकेयरअन्तर्गत एक्ने ट्रिटमेन्ट, कालो दाग हटाउने, छाला सेतो बनाउने, छाला कसिलो बनाउने, टाउकाको मसाज आदि पनि उपलब्ध हुन्छ ।
धेरैजसो मानिस के गर्न आउँछन् यहाँ ?
तौल घटाउनुका साथै फेसियल तथा डन्डिफोरको उपचारका लागि आउँछन् जसमा १८ वर्षदेखि ६५ वर्ष सम्मका महिला–पुरुष हुन्छन् । त्यसमा पनि महिलाको संख्या नै बढी हुन्छ ।
तौल घटाउने मेसिनले कुनै साइडइफेक्ट गर्छ कि ?
यो मेसिनले कुनै साइडइफेक्ट तथा एक्सरसाइजविना १५ दिनमै तौल घटाउँछ । त्यसैले कुनै झन्झटविना फिट तथा स्लिम देखिन सकिन्छ ।
तौल घटाउँदाको खानपान कस्तो हुनुपर्छ ?
हामीकहाँ तौल घटाउन आउनेहरूले हामीले नै दिएको खाना खानुपर्छ । हामी ब्यालेन्स डाइट उपलब्ध गराउँछौं ।
मेसिनको सहायताले तौल घटाउनुअघि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने केही कुरा छन् कि ?
मेसिन तथा भाइब्रेसनको सहायताले तौल घटाइने भएकाले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु रोगी तथा गर्भवती महिलाले यो सेवा लिनु हुँदैन भने महिनावारीको समयमा तथा एचआइभी लागेकाहरूले पनि यो सेवा लिनुहुँदैन ।
कार्तिक २८, २०७४ - लिटिल मिस क्वीनमा विशेषता
कार्तिक १५, २०७४ - इजी डिटक्स प्लान
आश्विन ३, २०७४ - चाडपर्व : प्रेम र सद्भावको मौसम
भाद्र १८, २०७४ - हीराका विशेषता
भाद्र १४, २०७४ - इजी स्लिम
भाद्र ९, २०७४ - लविज ब्युटी लन्ज एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर
डिप्रेशन जितेकी निरु खड्का भन्छिन्, ‘लाइफ इज ब्युटिफुल’ माघ २५, २०७५
मेरो डिजाइन लगाउने नारीमा खुसी देख्न चाहन्छु  माघ १६, २०७५
क्यान्सर के हो ? माघ १३, २०७५
स्वस्थ र लामो जीवनका लागि योग माघ ४, २०७५
जाडोका लागि उपयुक्त पहिरन पुस ३०, २०७५
पुरुषले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने पुरातन मान्यता तोडिएको छ पुस २५, २०७५